JW Purogiramu yeUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu yaMay 10-16, 2021
Rwiyo 51 Nemunyengetero
“Zadzisa Mhiko Dzako”: (10 min.)
Nu 30:10-12—Tinoziva sei kuti Erikana akabvumirana nemhiko yakanga yaitwa naHana yekuti Samueri aende kunoshumira Jehovha? (1Sa 1:11; it-2-E 28 ¶1)
Kuverenga Bhaibheri: (4 min.) Nu 30:1-16 (th chidzidzo 5)
Vhidhiyo Yepaunodzokera: (5 min.) Kukurukura nevateereri. Ratidzai vhidhiyo yakanzi Paunodzokera: Chinangwa chaMwari—Isa 55:11. Misai vhidhiyo yacho pese pane chiratidzo chekuimisa uye bvunzai mibvunzo inobuda pavhidhiyo yacho.
Paunodzokera: (3 min.) Shandisa mharidzo yekuenzanisira. (th chidzidzo 6)
Paunodzokera: (5 min.) Tanga nemharidzo yekuenzanisira. Mupe rimwe remabhuku atinoshandisa pakudzidza nevanhu, wobva watanga chidzidzo cheBhaibheri. (th chidzidzo 19)
Dzidza Kutsungirira Kubva Pazvinhu Zvakasikwa: (15 min.) Kukurukura nevateereri. Ratidzai vhidhiyo. Pachinhu chimwe nechimwe chataurwa muvhidhiyo iyi, bvunzai mibvunzo inotevera: Chisikwa ichi chinotidzidzisei nezvekutsungirira? Tingachitevedzerawo sei pakurarama kwedu kwechiKristu?
Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano: (30 min.) rr chits. 8 ¶16-22
Rwiyo 4 Nemunyengetero
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe May 10-16
Purogiramu yeUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu yaMay 10-16, 2021
mwb21 May p. 3